Umatshini ovunyiweyo wesekethe (i-ELCB) abavelisi kunye nababoneleli - i-china Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)
I-DAM1L Series yoMhlaba yokuKhusela ukuvuza kweSekethe (ELCB)
I-DAM1L uthotho lwentsalela yangoku (ukuvuza) ikhefu lesekethe (apha ekubhekiswa kulo njengokophula isekethe) luthotho olutsha lwentsalela ekhoyo ngoku (ukuvuza) okuphuhliswe ngempumelelo kusetyenziswa uyilo olukumgangatho wamanye amazwe kunye netekhnoloji yokuvelisa ephambili.
Ikhuselwe kwimeko yokubumba yesekethe.
I-voltage yokufaka yokulinganisa yokuqhekeka kwesekethe kolu luhlu yi-400V (Inm ingaphantsi kwe-160A) kunye ne-690V (Inm ingaphezulu kwe-250A), esetyenziselwa ikakhulu i-ac 50Hz kwaye ilinganiswe kwinethiwekhi yokuhambisa umbane nge-10A ~ 500A yangoku kunye nomthamo wokulinganisa umbane osebenzayo we-380V / 400V, isetyenziselwa ukuhambisa amandla ombane kunye nokukhusela ukugcwala kunye nokujikeleza okufutshane kwemigca kunye nezixhobo zamandla.
I-DAM1L-125 CBR ELCB yeSekethe yokuKhusela ukuvuza komhlaba
Kwiimeko eziqhelekileyo, inokusetyenziselwa ukutshintsha rhoqo kwemigca.
I-DAM1L-250 CBR ELCB yeSekethe yokuKhuselwa kokuVuza komhlaba
I-DAM1L uthotho lwentsalela yangoku (ukuvuza) ikhefu lesekethe (apha ekubhekiswa kuyo njengokophula isekethe) luthotho olutsha lwentsalela ekhoyo ngoku (ukuvuza) okuphuhliswe ngempumelelo kusetyenziswa uyilo oluqhelekileyo lwamazwe aphesheya kunye nobuchwephesha bokuvelisa obuphambili.
I-DAM1L-630 CBR ELCB yeSekethe yokuKhuselwa kokuvuza kokuvuza
Intshayelelo DAM1L series intsalela yangoku (ukuvuza) umaphuli wesekethe (apha ekubhekiswa kuye njengokophula isekethe) luthotho olutsha lwentsalela ekhoyo ngoku (ukuvuza) okuphuhliswe ngempumelelo kusetyenziswa uyilo olukumgangatho wamanye amazwe kunye netekhnoloji yokuvelisa ephambili. Ikhuselwe kwimeko yokubumba yesekethe. I-voltage yokufaka yokulinganisa yokuqhekeka kwesekethe kolu ngcelele i-400V (i-Inm ingaphantsi kwe-160A) kunye ne-690V (i-Inm ingaphezulu kwe-250A), esetyenziselwa ikakhulu i-ac 50Hz kwaye ilinganiswe ...
I-DAM1 -160L i-ELCB yokukhuselwa komhlaba kukukhusela isekethe1
I-voltage yokufaka yokulinganisa yokuqhekeka kwesekethe kolu luhlu yi-400V (Inm ingaphantsi kwe-160A) kunye ne-690V (Inm ingaphezulu kwe-250A), esetyenziselwa ikakhulu i-ac 50Hz kwaye ilinganiswe kwinethiwekhi yokuhambisa umbane nge-10A ~ 500A yangoku kunye namandla ombane alinganisiweyo e-380V / 400V, isetyenziselwa ukusasaza amandla ombane kunye nokukhusela ukugcwala kunye nokuhamba okufutshane kwemigca kunye nezixhobo zombane.Ngaphantsi kweemeko eziqhelekileyo, inokusetyenziselwa ukutshintsha rhoqo kwemigca.